LAURA CRANE, LOVE ကျွန်း၏ SURFER မိန်းကလေးအသစ်ကားမည်သူနည်း။ - သတင်း
Laura Crane, Love ကျွန်း၏ surfer မိန်းကလေးအသစ်ကားမည်သူနည်း။
တနင်္လာနေ့တွင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောကျွန်းကမ်းခြေကလပ်မှတစ်ဆင့်ခေတ္တလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်ကျွန်းသူကျွန်းသားအသစ်လေးယောက်သည် villa သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ အသစ်ရောက်ရှိလာသောယောက်ျားများထဲမှအသစ်တစ် ဦး ဖြစ်သောဆမ်၏ ဦး ခေါင်းကိုလှည့်ရန်အတွက်လာရောက်သူများထဲတွင် surfer နှင့် Laura မော်ဒယ်လ်တို့ပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူလဲ လော်ရာကရိန်း ? Laura ရဲ့ဘဝနှင့်အချိန်ကုန်ခံပြီး surfing Safari တစ်ခုယူကြပါစို့။
သူမအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီးပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ Ericeira မှာနေတယ်
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 10:58 pm တွင် PDT မှာမေလ 27, 2018 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
သူမသည်လှိုင်းသင်တတ်ရန်သင်ယူသောနေရာဖြစ်သော North Devon တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်မှန်သောအခြေအနေမရှိကမ္ဘာကိုခရီးထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်မကြာသေးမီကပေါ်တူဂီသို့အမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည် - ပထဝီအနေအထားအရရော၊
သူမသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် surfer ပါပဲ
123 ဖျက်စီး 123 321?
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း (@lauraloucrane) 5:28 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 12, 2018 ရက်တွင်
သူသည် ၁၃ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး ၁၆ နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်ချန်ပီယံဖြစ်လာသည်။ သူသည် Team GB surfing team ကိုအမြဲတမ်းကိုယ်စားပြုသည်။ လော်ရာကိုသူ၏မွေးရပ်မြေ Croyde မှကယ်လီဖိုးနီးယားအထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလှိုင်းတံပိုးများဖမ်းမိသည်။
ပျော်ရွှင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ surfing နေ့လား
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 11:58 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 16, 2018 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
သူမသည် GQ ၏ 'အပူဆုံး surfer Babes' စာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @GQ ?? ... ဒီတစ်ခုယူမယ်။
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း (@lauraloucrane) ၂၀၁၅ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်ည ၁၁း၆ နာရီ PDT တွင်
လော်ရာ၏ကျော်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအဆိုတင်သွင်းချက်မှာနွေရာသီအယူအဆအတွက်လူ့ဥပစာအဖြစ် Metro တွင်ဖြစ်သည်။
@sophiehellyer ကိုသင်တွေ့ရမည့်အရာများကိုယနေ့နံနက်ဘယ်တော့မှမသိရပါ။ @nalubeads @billabonggirlseurope @billabongwomens @nixon_now @drift_innovation @metro
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း (@lauraloucrane) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်၊ ၁၂း၄၂ တွင် PDT
Laura ၏ထင်ရှားကျော်ကြားသော“ ကျွန်းတဝက်ကျော်ကြားပြီးချစ်မြတ်နိုးသောကျွန်းသူကျွန်းသားများ” ထဲမှတစ်ခုသည်သူမ၌ ၁၂၀ ကီလိုမီတာနောက်လိုက်များရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများကသူမအားပြပွဲ၌သူမအားဆမ်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့၏နောက်လှည့်ကွက်တစ်ခုထပ်မေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သူမအသက် ၁၈ နှစ်ကတည်းကမော်ဒယ်လ်လုပ်နေသူဖြစ်သည်။ သူ၏အညွန့်အများစုသည်ဂန္ထဝင် 'beach + bikini + blonde' ပုံသေနည်းတွင်ကစားသည်။
ဒီနေ့ ... နွေ ဦး ရာသီ၏ပထမနေ့! ဓာတ်ပုံကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် @joana____duarte pooks
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 12:15 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 18, 2018 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
မင်းကဒီမိန်းကလေးကိုယူကေကနေခေါ်ထုတ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဗြိတိန်ကနေဒီယူနီဖောင်းကိုမယူနိူင်ဘူးလား ?? @sweatybetty leggings? #sweatybetty #SBpower
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 5:30 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 5, 2018 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
သူမသည် villa တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေနေသည်
လော်ရာတွင်သူနှင့်ရင်းနှီးနေဆဲဖြစ်သော surfer ကောင်လေးရည်းစားနှစ် ဦး ရှိသည်။ သို့သော်သူသည် villa တွင်အသစ်တစ်ခုရှာနေသည်။ လော်ရာသည်ဟာသဉာဏ်ရှိသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေသည်။ သူမအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအလှည့်အပြောင်းများနှင့်အတူစွန့်စားခန်းများကိုမျှဝေနိုင်သည်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ယောက်ျားလေးများသည်လျှောက်ရန်မလိုပါ။ သူသည်ခြေထောက်ငါးပေမပြည့်သေးသော 'အရပ်ရှည်ရှည်' ကောင်လေးနှင့်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ နက်ရှိုင်းသောအဆုံး၌ခေါင်းကိုမနင်းသူကိုသူမရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်သည်။
ရေကလေး ?? P.c @jackjohns
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 4:43 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 8, 2016 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
ဤ @seelenbandsoulapes ပုံသဏ္phoneာန်သည်ကျွန်ုပ်၏မွေးရပ်မြို့ Ericeira ၏ညကောင်းကင်ယံတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်သွားခဲ့ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏နာမဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်၌မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေကျွန်ုပ်သည်အိမ်၏အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုအမြဲတမ်းရနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ 15 သင့်ရဲ့ချွတ်ယူဒီကုဒ်: LAURACRANE15 ကိုအသုံးပြုပါ
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 3:57 pm တွင် PST မှာမတ်လ 10, 2018 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
ထိပ်၏ surfing AKA ။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ပြားနေပြီးကျွန်ုပ်သည် surf board ပေါ်တွင်ဘီးများတင်ခဲ့သည်။
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 7:40 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 2, 2017 ရက်တွင် (@lauraloucrane)
သူမမှာ Youtube လိုင်းရှိတယ်၊
“ Heathrow၊ ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး Youtube ဗွီဒီယိုအတွက်ပိတ်ထားနိုင်တယ်” - လော်ရာကသူမ၏ဗီဒီယိုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယမြောက်အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။ သူမသည်ပီဇာပေါ်တွင်နာနတ်သီးကိုနှစ်သက်ကြောင်းဝန်ခံရန်ဗီဒီယိုကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
အတွင်းပိုင်း, အပြင်ဘက်, လော်ရာချီစက်
Love Island ခရီးကိုနှစ်ပတ်သာကျန်တော့သည်။ Laura သည်အချစ်ဆုံးသို့အချိန်ကုန်သွားပြီးနောက်ဆုံးသို့သွားနိုင်သည်။
မျှဝေသည် လော်ရာကရိန်း 12:41 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 16, 2018 ရက်တွင် (@lauraloucrane)